Ivotoerana momba ny banky sy ny fanapaha-kevitra tsara indrindra any ivelany
Fandraisana fahefana amin'ny banky tsara indrindra any ivelany
Fitsipika momba ny banky any ivelany dia voatanisa ao anaty filaharana
Ireto ny lisitry ny tsara indrindra sy voaaro indrindra offshore bank les juridictions. Soa ihany fa nanao fikarohana betsaka izahay. Noho izany, afaka manolotra torohevitra sy torohevitra isika hanamora ny asanao. Noho izany, ireo firenena ireo dia manana lalàna manome ny fiarovana ara-bola, fiainana manokana, fanamorana ary manome valisoa amin'ny fampiasam-bola amin'ny fifaninanana.
Ho an'ny tahiry voalohany amin'ny $ 250,000:
Ny OffshoreCompany.com dia manam-pahaizana manokana amin'ny kaonty banky any Suisse ary ny fanapahana hafa mahasoa. Ka fenoy, azafady mameno ny taratasy fakan-kevitra na ampiasao ny iray amin'ireo laharana an-tariby eto amin'ity pejy ity. Ankoatr'izay, afaka mitsidika ny fizarana iray manontolo izahay Banky Swiss.
Ho an'ny fametrahana ny $ 250,000, ireto ny fitsarana omena:
Karaiba (firenena maro - antsoy ny laharana an-telefaona etsy ambony ho amin'ny antsipirihany)
Ny Cook Cook
Karaiba sy Belize (jereo andalana mena)
Any amin'ny firenena midina hetra, ambany ny fisokafan'ny kaonty. Amin'ny lafiny iray, avo kokoa ny tsiambaratelo. Ao amin'ny sehatra eoropeana, na izany aza misy ny fifanarahana izay mampitombo ny fepetra takiana tokony ho an'ny banky mpikambana. Araka izany, ny tompona kaonty mety dia mila mamokatra antontan-taratasy fanampiny ho an'ny mpanjifa. Nantsoin'izy ireo io fifanarahana io fa ny Fikambanana Iraisam-pirenena Miaro ny hetra 2005.
Avy eo, tamin'ny Desambra 2014, ny filankevitry ny Vondrona Eropeana dia nandray ny Directive 2014 / 107 / EU. Manome fiaraha-miasa amin'ny banky sy ny governemanta momba ny resaka hetra izany (“Torohevitra momba ny fanampiana ara-piraisan-davitra eropeana"). Araka izany, ny tatitra nataon'ny banky dia nahazo tombony sy fizarana vola, ary koa ny fidiram-bola hafa. Amin'ny alàlan'ny alalàn'ny firenena dia mifanakalo fifanakalozana vaovao amin'ny hetra amin'ny firenena hafa.
Ireo torolàlana ireo dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny tsiambaratelo amin'ny banky any amin'ny firenena sasany miankina amin'izany. Ankoatr'izay, ny Directive Tax Tax dia mety hametra ny tsiambaratelo sy ny fiainana manokana any amin'ireo banky any ivelany. Raha ny mazava dia tsy mihatra afa-tsy amin'ireo banky mipetraka ao amin'ireo faritany izay eo ambanin'ireny didika ireny.
Firenena araka ny torolàlana momba ny banky EU
Ho an'ity fanoratana ity, dia toy izao manaraka izao ireo firenena mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana:
Aotrisy, Belzika, Sipra, Repoblika Tseky, Danemark, Estonia, Finland, Frantsa, Alemana, Gresy, Hongria, Irlandy, Italia, Latvia, Litoania, Luxembourg, Malta, Holanda, Polonina, Portugal, Slowakia, Slovenia, Espana, Soeda, ary ny Fanjakana Mitambatra. Ho fanampin'ny firenena EU, ny torolàlana dia misy ihany koa ny fifanarahana eo amin'ny EU sy Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, ary Suisse.
Izay sehatra sahanin'ny sarambabem-bahoaka dia miankina amin'ny Direction Tax an'ny EU. Ankoatr'izay, ny firenena rehetra izay eo ambany fitantanan'i, na koa mpandrafitra an'ireo firenena ireo dia misy ihany koa. Ny hafa dia mety hanaiky an-tsitrapo, toa an'i Soisa sy Etazonia.
Raha adika fotsiny, ny 2014 dia fifanarahana eo amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Vondrona Eropeana ary ny lisitry ny firenena manakaiky. Izany, mamela manokana ny fifanakalozana fifanakalozana ara-bola na transactional. Ny EU dia miantso an'io fifanarahana io hoe "safidy otoman'ny fifanakalozana ny fampahalalana" ary izy no mari-pankasitrahana.
Ny fanapahana any ivelany dia tsy manaraka ny lalàna EU na torolàlana dia tsy mandray anjara amin'ity fifanarahana ity. Noho izany, azon'izy ireo atao ny mampitombo ny tsiambaratelo ny fidiram-bolan'ny mpanara-dalàna.
Fandraisana anjara amin'ny banky hafa
Betsaka ny sehatra tsy miankina hafa izay manome tombony betsaka mitovy amin'ny ataon'ireo Vondrona EU. Saingy tsy fehezin'ny Direction EU izy ireo. Tsy ilaina ny milaza, matetika dia fiheveran-danja lehibe tokoa ho an'ny mpampiasa vola na mpikirakira mitady azy manokana izany. Izany dia satria mety hahazo tombontsoa manokana ianao izay tsy azo tanterahina ny fanapahana iray momba ny lalàna momba ny Directive EU. Eny tokoa, dinihina lehibe izany. Na izany aza, tsy tokony hihevitra avy hatrany ianao fa mahasoa indrindra amin'ny banky amin'ny fikaonan-dàlana tsy EU.
Aoka hatao hoe mahafeno ny fepetra takian'ny vola natokana ho an'ny mpizara vola. Manana ny tanjony amin'ny banky izy mifanaraka amin'ny bankiny sy ny fari-piadidiany. Raha izany, ny toerana ivelan'ny tanàna toa an'i Soisa dia afaka mifanentana amin'ny filàny. Na izany aza, misy ny sehatra tena mahay mifehy fa tsy miankina amin'ny Direction Tax an'ny EU. Izy ireo dia mety manana fangatahana fametrahana voalohany faran'izay ambany kokoa noho ireo faritany "napetraka". Ohatra, ny sehatra sasany toa an'i St. Vincent sy Belize dia mitaky kely amin'ny $ 2000 US mba hanomboka.
Ny fomba niovan'ny banky
Talohan'ny fipoahan'ny Internet ny antenantenan'ny 90 sy ny 9 / 11 ny mpampihorohoro, dia tsotra kokoa ny tontolon'ny banky. Ohatra, ireo tompon-kaonty sy ireo mety hisambotra amin'ny banky any ivelany dia tsy maintsy mandeha ara-bakiteny ao amin'ny banky. Ilaina izany mba hanokafana kaonty. Raha tsy izany dia afaka mandefa solontena nahazo alalana hanao izany fotsiny izy ireo. Tsy maintsy nametraka kaonty, vola am-bola, na fanao amin'ny fifanarahana manokana izy ireo. Ny fomba taloha "boaty hidy sy lakile" dia nanjaka indrindra.
Na izany aza, hatramin'ny tapaky ny 90's, dia nisy ny fihisahana lehibe. Nisy fipoahana marim-pototra nisy teo amin'ny teknolojia teo aloha tsy takatry ny maro teo amin'ireo indostrian'ny serivisy manerantany. Ity dia mazava ho azy fa misy ny banky any ivelany.
Tsy eo intsony ny andro tokony handehanana any amin'ny banky. Ankehitriny, ny ankamaroan'ny serivisy dia manakaiky ny fitendry anao akaiky indrindra. Araka ny fantatrao, manana kaonty malalaka maneran-tany izahay ankehitriny. Manana carte de crédit ihany koa isika toy ny carte de debit ary ny fahatongavan'ireo fandefasana vola elektronika. Ankoatr'izay, misy sonia virtoaly, ary ny fidirana amin'ny Internet tsy misy fetra. Noho izany, ny banky any ivelany dia novaina ho vahaolana tsotra kokoa ho an'ny tsirairay sy ny orinasa.
Tsy maninona na any amin'ny fanjakana Grand Canyon na any Grand Cayman ny bankinao. Ny ankamaroan'ny endri-javatra atolotry ny banky dia tsindry totozy fotsiny. Aoka hoheverintsika fa nihaona sy nifanaraka tamin'ny fepetra rehetra ireo ianao ary tsy hanao hetsika ara-dalàna ihany. Raha izany no izy dia azo antoka toy ny hatramin'izay.
Additional Information Banking Information
Banky Offshore miasa toy izany koa amin'ny kaonty banky mahazatra. Manokatra ny kaonty ny banky. Avy eo, ny mpanjifa dia mahazo karatra debit amin'ny kaonty na carte de crédit. Ireo mpanendaka dia miditra amin'ny Internet. Mora ny fanaovana famindrana tariby ary manatanteraka ny fifanakalozana fifanakalozana kaonty amin'ny banky. Midira fotsiny an-tserasera ary araho ny torolàlana. Ireo banky any ivelany dia manolotra maro amin'ireo fiasana mitovy ary maro no manolotra serivisy mpanjifa lehibe. Rehefa misafidy ny andrim-panjakana misy anao dia zava-dehibe ny misafidy ny mpanome izay mety amin'ny scenario anao.
Araka ny voalaza, betsaka ny sampandraharaha amin'ny banky any ivelany izay hahafahanao manangana kaonty banky amin'ny alàlan'ny fametrahana vola 2000 kely. Amin'ny tranga hafa, miankina amin'ny banky ianao, dia afaka miangona kely kokoa. Ankoatr'izay, ireo mpanome kaonty amin'ny banky any ivelany izay atoro azy dia tena voafehy ary manaraka ny lalàna mifehy ny tsiambaratelo iraisam-pirenena. Ny kaonty tsy miankina matetika dia mitaky tahiry mialoha kokoa. Na izany aza dia azo amina fifampiraharahana arakaraka ny tanjon'ny kaonty amin'ny ankapobeny sy ny fanombohana.
Ny OffshoreCompany.com dia manao fikarohana momba ireo mpanome tolotra ara-bola manerana izao tontolo izao. Izahay dia manome antoka fa afaka miditra ny kaontiny amin'ny alàlan'ny telefaona, fax, mailaka ary Internet. Ankoatr'izay, dia manao izay tratry ny herinay izahay mba hahazoana antoka fa mihaino tsara ny filan'ny mpanjifanay izy ireo. Fanampin'izay dia te-hahazo antoka isika fa manan-tsaina sy tsy miankina isika.
Hetra ivelan'ny tanàna
Matetika, ny fandanjan'ny kaonty amin'ny kaontinao any ivelany dia hahazo tombony. Azonao atao koa ny mangataka anay hanangana kaonty fampiasam-bola any ivelany. Ny tombam-bolan'ny zana-bola sy ny fampiasam-bola matetika dia tsy misy hetra any an-toerana amin'ny fananan'ny banky. Ny tahan'ny zanabola matetika dia avo kokoa ary mifaninana ny sarany. Betsaka ny orinasa 500 vintana, anisan'izany ny orinasan-tsolika no manararaotra ny banky any ivelany. Ny sasany amin'ireo faritany malaza amin'ny hetra malaza indrindra dia manana banky an-jatony izay hofidina.
Ny andrim-panjakana ara-bola ao amin'ny sehatra tsy miankina dia tsy mitantara ny mombamomba ny kaontin'ny mpanjifa amin'ny governemanta vahiny. Tsy mitaterana azy ireo akory izy ireo. Ka anjaranao amin'ny tompon'ny kaonty ny hanaovana izany. Amin'ny maha tompon'andraikitra anao, mazava ho azy, manoro hevitra izahay fa hanaraka ny hetra ireo lalàna mifehy ny fahefana nomenao andraikitra. Firenena maro, ao anatin'izany ny hetra amerikana manerantany. Noho izany, voalohany izahay hanampy anao hanangana ny orinasanao sy ny kaontinao. Avy eo, manana CPA izay manana fahaizana betsaka izahay ary afaka manampy amin'ny fanajariana ny hetra amin'ny vola iraisam-pirenena.
Ny OffshoreCompany.com dia manangana rafitra fandraharahana an'arivony, kaonty amin'ny banky, tsiambaratelo ary fiarovana amin'ny fananana manerantany. Ny fiarovana sy ny fitomboan'ny volan'ny mpanjifanay no tena atahorantsika lehibe indrindra.
Manome tombony betsaka ny andrim-bolan'ny banky any ivelany, raha ny momba azy manokana dia sarotra voadaroka i Switzerland. Nanome fizarana feno izahay Banky Soisa izay ahafahanao mianatra bebe kokoa momba ny kaonty banky manokana.
<Ho an'ny toko 10
Ho an'ny toko 12>